RSS amin'ny mailaka vahaolana ho an'ny WordPress
Alatsinainy Janoary 10, 2011 Zoma, Martsa 1, 2013 Douglas Karr
My Campaign Pro ary mpiara-miasa, Bill Dawson, nanangana ny vaovao gazety isan-kerinandro vao nanomboka androany. (Raha mbola tsy nisoratra anarana ianao, dia mahazo $ 12,000 mahery amin'ny loka… ary mitombo!).
Mba hanamorana izany, Luke Newton ao amin'ny My Campaign Pro, dia manangana modely ao anatin'ny rafitra izay maka HTML fotsiny avy amin'ny toerana rehetra amin'ny tranonkala - na misy feed na pejy HTML mavitrika. Ity dia antsoina hoe sombintsombiny ao amin'ny rafiny ary afaka manondro atiny voatahiry, manana atiny mavitrika, na misintona RSS na avy amin'ny pejin-tranonkala:
Ny dingana manaraka dia ny fanondroana ilay sombintsombiny ao anatin'ny HTML amin'ilay modely mailaka amin'ny alàlan'ny tady fanoloana:
Avy eo i Bill dia namolavola sokajy iray tao anatin'ny WordPress nantsoina Newsletter izay miseho fotsiny amin'ny pejy anatiny miafina ary tsy tafiditra amin'ireo lahatsoratra ao amin'ny bilaogy. Ao amin'ny WordPress, ity dia atao amin'ny alàlan'ny fampidirana singa fangatahana sasantsasany ambonin'ny loop:
Nanavao ny fahana ihany koa izahay mba hanesorana ireo lahatsoratra rehetra, izay tontosa tamin'ny querystring:
Fa maninona ity no tsara? Isan-kerinandro dia manoratra lahatsoratra bilaogy amin'ny sokajy Newsletter fotsiny aho izao ary manatanteraka ny fanentanana halefa. Ny rafitra dia esoriny ho azy ny atiny ao amin'ny pejy manokana (ary koa ny fahano Twitter) ary ny mailaka dia novokarina ary nalefa. Tsy izany ihany no tsara fa tsy ny manahy atiny afa-tsy ny manoratra atiny ao anatin'ny WordPress… Hanana kopia amin'ny mailaka rehetra nalefa ihany koa aho!
Luke dia manome fahazoan-dàlana 2 isan-taona (miaraka amin'ny mailaka hatramin'ny 500 alefa) miaraka amin'ny fanohanana - ka aza hadino ny misoratra anarana ho an'ny Gazety momba ny haitao marketing ho an'ny vintana handresy!
Tags: bilaogim-baovaobilaogy handefa mailakamailaka Marketing
10 Jan 2011 amin'ny 10:41 PM
Misaotra ny lahatsoratra Doug! Tena faly izahay momba ilay gazety vaovao ary reharehantsika fa anisan'izany!
Hitanay fa ity dia fomba tsara iray ahafahan'ny mpampiasa WordPress mavesatra manohy mampiasa ny motera mpanoratra tiany indrindra amin'ny famoronana atiny sy fitazonana azy rehetra amin'ny toerana iray.
Ny tena hery dia ny fahaizana mitondra ambaratonga mandeha ho azy mitovy amin'ny WordPress alefa amin'ny mailaka. Misintona fotsiny ny atiny ary ampio amin'ny fandefasana fandaharana tsy tapaka ho an'ny andian-dahatsoratra mailaka mandeha ho azy miaraka amin'ny fikolokoloana kely. Tsy misy kopia na petaka intsony - manamboatra azy indray mandeha fotsiny ary mandefasa automatique!
Ary amin'ny atiny rehetra ao amin'ny WordPress - mora ny mizara an'io votoaty io ivelan'ny mailaka.
Raha mpampiasa WordPress ianao, dia misy dikany ny hanaovana an'io!
Ary koa: maniry ny hahita vintana tsara ho an'izay rehetra miditra amin'ny fifaninanana izahay - faly tokoa izahay fa anisan'ny fankalazana ny lahatsoratra faha-2,500!